Ngabe ufuna isethaphu esinamandla nesinokwethenjelwa sokukhishwa ukuze ukhiqize izingcwecwe ezisezingeni eliphakeme ze-botanical? Lapha ungathola ukuqhathanisa kwamasu wokukhishwa okujwayelekile kufaka phakathi isizinda se-ultrasonic, CO supercritical2 isizinda, i-ethanol isizinda, ukucubungula phakathi kwabanye nezinzuzo zabo kanye nokubi.
Yini ama-Botanical Extracts?
Ama-botanicals anjengamaqabunga, amacembe, izimbali, iziqu, izimpande, kanye namagxolo aqukethe izinto eziyingozi (amakhemikhali e-phyto), ezisetshenziswa ekudleni naseziphuzweni, ezekelweni zokudla, ezokwelapha nakwezemithi nasemikhiqizweni yezimonyo. Izibonelo ezinhle kakhulu zokukhishwa kwe-botanical ama-antioxidants, amavithamini (isib. I-vithamini A, C, E, K; B amavithamini), amaprotheni (isib. Hemp, soy), polyphenols, flavonoids, terpenes, cannabinoids (isb. CBD, CBG, THC), oligosaccharides, kanye ne-lipids (isib. i-omega-3s evela kwimbewu yefilakisi noma imbewu ye-hemp).
Ama-antioxidants asebenza njengendlela enamandla yokuvikela evikela amaseli womzimba emonakalisweni ukusuka ekuguguleni, ekuxinekeni, ekuvuvukeni nasekuguleni. Ucwaningo luphinde lukhombise ukuthi ama-antioxidants anganikela njengokwengeza isistimu ye-immun futhi akhombise izakhiwo ezilwa nomdlavuza. Ngaphezu kwalokho, ama-antioxidants avimba ukukhiqizwa kwama-oxid wemikhiqizo futhi anwebe ngokwenza kwawo ukuqina nokuphila eshalofini. Ngakho-ke, ama-antioxidants anezelwa ekudleni naseziphuzweni eziningi, izithasiselo zokudla okunempilo, zokwelapha kanye nemikhiqizo yezimonyo. Izibonelo ezivelele kakhulu zama-antioxidants yi-Vitamin E (α-tocopherol), uvithamini C (ascorbic acid), beta-carotene kanye ne-glutathione.
Ama-antioxidants nezinye izinhlanganisela ze-bioactive zingakhishwa ezintweni zemvelo ezinjengama-botanicals noma i-algae noma zenziwe ngobuciko. Izinhlanganisela ze-Bioactive, ezikhishwe emthonjeni wemvelo, zibonisa i-bioavailability ephezulu, ukutholakala kwe-bioaccessability futhi ngaleyo ndlela kukhule i-potency. Ngakho-ke, kuma-supplements asezingeni eliphakeme ngokwemvelo akhiqizwa i-phyto-khemikhali asetshenziswa.
Isizinda Sokukhishwa Kwekhwalithi Ephezulu kusuka ku-Botanicals
Okokukhishwa kwekhwalithi ephezulu ye-botanical kusuka hhayi kuphela ezintweni ezingavuthiwe (isitshalo sendalo) kubalulekile, kepha futhi necebo lokususa elisetshenzisiwe libalulekile. Izikhiphi zezitshalo zithinta ukushisa, okusho ukuthi zonakaliswa ukushisa. Ngakho-ke kubalulekile ukukhetha indlela yokukhipha engeyona eyokwelapha.
Ukukhethwa kwe-solvent yokukhipha kungenye into ebalulekile, enomthelela kwikhwalithi yokukhipha. Izithako ezinjenge-hexane, i-methanol, i-butane namanye amakhemikhali anokhahlo angangcolisa ukukhipha. Noma izinyibilikisi zisuswa ngemuva kokukhishwa, amathrekhi ezinto ezinobuthi angatholakala ekukhishwe kokugcina. Amanzi, utshwala, i-ethanol, i-glycerine noma i-oyela yemifino aphephile, angasebenzisi ubuthi obunobuthi futhi avunyelwe yi-FDA ukuthi usetshenziswe.
Ukukhishwa kwe-botanical ne i-ultrasonicator UP400St
I-Hielscher Ultrasonics iyaziqhenya ngokuba umlingani we-Eden Ecosystem, iphayona lezimakethe lamasu amasha wokukhipha kanye nekhwalithi ephezulu yemvelo kanye nama-flavour extracts.
I-Eden Ecosystem igxile ekukhiqizeni izicucu zezitshalo zamakha, ukunambitheka, izimonyo nezithako zokudla okunempilo.
Njengoba i-Eden Ecosystem isebenza kuphela ngamasu wokukhipha amancanyana njenge-ultrasound ne-eco-friendly, amakhemikhali awuketshezi angenabuthi, okukhishwayo okuvelayo okusha ngokuphelele futhi kunothe.
Njengoba sesithole isipiliyoni esingajwayelekile kuzinhlelo zokusebenza zokukhishwa kwe-botanical, i-Eden Ecosystem inikeza futhi insizakalo yokubonisana yabasebenzisi nabakhiqizi besithathu.
Vakashela iwebhusayithi ye-Eden Ecosystem 'ukuze ufunde kabanzi ngemikhiqizo nezinsizakalo zabo!
Izinzuzo Zokukhipha i-Ultrasonic shazi:
I-Ultrasonic Extraction isebenza kanjani?
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kusekelwe kumgomo osebenzayo we-ultrasonic / acoustic cavitation futhi kuyindlela yokwelapha engejwayelekile. Ifana ne-mixer ephezulu ye-shear, i-ultrasonicator idala kuphela amabutho e-shear mehendi inqubo ephakathi nendawo. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic ngokwayo kuyindlela engakhanyi yokushisa, engenamakhemikhali.
Kuyini i-Acoustic Cavitation? – I-acoustic noma i-ultrasonic cavitation yenzeka lapho amandla amakhulu,
amagagasi e-low-frequency ultrasound ahlanganiswa abe yisidlali esakhiwe ngezinto ze-botanical ku-liquid (solvent). Amagagasi anamandla amakhulu e-ultrasonic ahlanganiswa nge-processor ye-probe-hlobo ye-ultrasonic kwi-botanical slurry. Amagagasi e-Ultra anamandla amakhulu ahamba emgudwini uketshezi enza ukushintshana kwemijikelezo ephezulu-yengcindezi / ephansi, okuphumela kummangaliso we-acoustic cavitation. I-acoustic noma i-ultrasonic cavitation ihola endaweni yakini ezimeni ezibucayi njengokuhlukahluka okukhulu kwengcindezi namandla amadevu aphezulu. Lapho ama-Bubble we-cavitation efaka ebusweni bezinto ezinamanzi (ezinjengezinhlayiya, amaseli ezitshalo, izicubu njll.), Ama-jets amancane kanye nokushayisana kokunye kukhiqiza imiphumela efana nokuqhekeka kwezinhlayiya, i-sonoporation (ukugcotshwa kwezindonga zeseli nezitho zamangqamuzana) neseli ukuphazamiseka. Ngaphezu kwalokho, ukuvezwa kwama-bubble we-cavitation kwimidiya ye-liquid kudala isiphithiphithi nokuguguleka, okuthuthukisa ukuhanjiswa okuningana phakathi kwengaphakathi leseli nokuhlala okuzungezile. I-Ultrasonic irradiation iyindlela esebenza kahle yokuqhakambisa izinqubo zokudlulisa ngobuningi, ngoba i-sonication iphumela emgudwini wezinsimbi kanye nezindlela zalo ezihlobene njengokuhamba kwe-micros-by Jets liquid, compression and decompression in the material with a following following wall of cell wall.
Ngokuya ngezinto ezingavuthiwe, inqubo yokukhipha i-ultrasonic ingadinga amandla aphezulu, isb ukwephula amaseli esitshalo aqine noma impahla ngenani elikhulu le-cellulose. Ama-ultrasonicators weProbe angakhiqiza ama-amplopes aphezulu kakhulu, okudingekayo ukukhiqiza i-capacitor enomthelela. I-Hielscher Ultrasonic yenza okokusebenza kwe-ultrasonic okwenziwe okuphezulu, okungakha kalula amplidence we-200µm ekusebenzeni okuqhubekayo kwe-24/7. Ngezikhuliso eziphakeme kakhulu, i-Hielscher inikeza ama-sonotrodes aphakeme kakhulu we-amplitude.
Izithinta ezisebenza nge-Pressurizable ultrasonic kanye namaseli okugeleza zisetshenziselwa ukwenza umfutho we-cavitation. Ngokucindezela okukhulayo, i-cavitation kanye ne-cavitational shear Force iba yingozi kakhulu futhi ithuthukise ngaleyo ndlela imiphumela yokukhishwa kwe-ultrasonic.
I-UIP4000hdT, iprosesa elinamandla le-4kW ngokukhishwa kwe-botanical
Khipha i-Phyto-Chemicals ne-Bioactive Compounds nge-Sonication
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kusetshenziselwa ukukhipha futhi kuhlukanise izinhlobonhlobo zezinto eziyinkimbinkimbi ze-bioactive (okuthiwa i-phyto-chemical) kuma-botanicals.
Uhlu olungezansi lukunikeza ukubuka konke okuncane ngamakhemikhali e-phyto akhishwe ngaphezulu:
I-CBD namanye amaCannabinoids avela eCannabis naseHemp
I-Caffeine evela Kabhontshisi Wekhofi
U-Allicin ovela kuGarlic
Ama-Catechins (EGEC) avela Tea
I-Ellagitannins kusuka ePomegranate
Ama-Ayurvedic Herbal Extracts
UNicotine ovela kuTogwayi
Ama-Pectins avela ku-Citrus Fruit Peels
Izixazululo zokusetshenziswa kwe-Ultrasonic Extraction
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyahambelana cishe nanoma yikuphi i-solvent. Kusetshenziswa kakhulu i-ethanol, amanzi, i-ethanol / amanzi, i-glycerine, kanye nemifino yezithelo ukuthola izithako ezixubile ezivela ku-botanicals njengoba lezi zincibilikisi zithathwa njengeziphephile ukusetshenziswa futhi kulula ukuzisebenzisa.
Funda kabanzi ngezixazululo ezisetshenziselwa isizinda se-ultrasonic!
Izinzuzo ze-Ultrasonic Ethanol Extraction
I-Ethanol ingelinye lamamoya asetshenziswa kakhulu ngokufakwa kwe-ultrasonic ngenxa yokuphepha kwayo (i-FDA-ivunyelwe ukusetshenziswa), ukusebenza kwayo kahle, kanye nokuqina kwayo okubanzi okubanzi. Ukukhishwa kwe-ethanol ye-Ultrasonic kudlula ezinye izithambeka nobunye ubuchwepheshe bokukhishwa ngokubiza kwezindleko, ukuqina komugqa, ukwenza lula, nokuphepha.
Ukusebenza kokuphakama kwe-ethanol njengoba i-solvent kuxhunyaniswe nokwakheka kwamakhemikhali komsila we-hydrocarbon neqembu elilodwa le-hydroxyl. Lokhu kuhlanganiswa kwamakhemikhali kuvumela i-ethanol ukuthi inyakaze futhi ikhiphe inani elikhulu kakhulu lezinto, kuma-polyphenols, ama-flavonoid, ama-terpenes, ama-cannabinoids, kanye ne-lipids (uwoyela).
Isibonelo, ukukhishwa kwe-ethanol ye-ultrasonic ye-cannabinoids akudingi ubusika (dewaxing), isinyathelo esidingekayo ngezinye izindlela zokukhishwa njenge CO2 isizinda ukususa waxes.
Ukukhishwa kwe-Ethanol kukhombisa imiphumela ehlukene ngokuya ngokushisa kwe-ethanol.
I-ethanol efudumele ijwayele ukusetshenziselwa ukukhipha okugcwele okubanzi, okubhekelwa ukusebenza kwabo okunamandla. Ngakolunye uhlangothi, i-ethanol ebanda iqhwa isetshenziswa ngokukhethekile ukwenza ama-herbal noma ama-cannabis distillates. Ukukhishwa ku-ethanol ebandayo yeqhwa akudingi ukuhlungwa okulandelayo. Njengoba isizinda se-ultrasonic siyindlela yokwelapha engeyona eyeqile, ingasetshenziswa nge-hot / i-ice ethambile noma eshisayo / ebandayo. Ama-reactors e-Jacketed ultrasonic asiza ukugcina izinga lokushisa elifunwayo ngesikhathi sokulashwa. Isoftware elawulwa yidijithali ne-smart software ye-ultrasonicator iqapha izinga lokushisa lisebenza nge-sensor lokushisa elinamandla futhi ingafakwa kuhlanganiswe ukumisa noma kunqume ukwelashwa okukhishwa lapho izinga lokushisa eliphakathi lifinyelela ebangeni elithile.
Thenga Izinto Ezisebenza Kakhulu Zokususa we-Ultrasonic
Izinhlelo zokukhishwa okuphezulu kwe-Hielscher Ultrasonics 'zitholakala nganoma yisiphi isikali kusuka ngosayizi omncane welebhu, isikali somshayeli wasemkhatsini ophakathi nendawo kuya ekukhiqizweni kwezimboni kwamathani amaningana ngehora. Ngokuya ngokusebenzisa okungaphezulu, izithasiselo ze-Hielscher ultrasonic zingasetshenziswa ku-batch noma emodini eqhubekayo ye-inline. Ukukhethwa kwe-solvent kukuwe, njengoba ama-Hielscher ultrasonicators angasetshenziswa ngokuhlangana nanoma iyiphi i-solvent. Wonke amadivaysi okukhishwa kwe-ultrasonic alula futhi aphephile ukusebenza. Ngokuya ngendwangu yakho eluhlaza, amandla okusebenza nenhloso yokuphuma, i-Hielscher ikunikeza i-ultrasonicator efanele kakhulu.
Izinqubo zokukhishwa kwe-Ultrasonic zithonywa izinto ezingavuthiwe, i-solvent, kanye nokuphuma. Izesekeli ezahlukahlukene ezinjengama-sonotrodes (ama-probes) ezinobukhulu obuhlukahlukene nobukhulu, izimpondo ze-booster, amaseli okugeleza anamavolumu ahlukahlukene namajomethri, izinga lokushisa elinamandla kanye nezinzwa zokucindezela namanye amagajethi amaningi atholakalayo ukuqoqa ukusetha okuhle kwe-ultrasonic kwenqubo yakho yokususa.
Ukulawulwa kwenqubo kubalulekile ukuze uthole umphumela ongazalwa kabusha. Ngakho-ke, wonke amamodeli edijithali ahlome nge-software ekhaliphile, evumela ukuthi uguqule, uqaphe, uphinde ubukeze nemingcele yokukhipha. Ngenxa yokulawulwa okuqondile kokukhula, isikhathi se-sonication nesikhathi somsebenzi, imiphumela emihle yenqubo efana nesivuno esiphakeme nekhwalithi ephezulu kakhulu yokudonsa ingatholakala. Ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo kwenqubo ye-sonication kuyizisekelo zokumiswa kwenqubo kanye nokuzala kabusha / ukuphindeka, okudingeka kuMikhuba Yokukhiqiza Okuhle (GMP).
I-Ultrasonic homogenizer UIP2000hdT (2kW) ngesivinini sokushukumisa se-batch
Amaqiniso Angahleliwe Okufanele Ukwazi
Kanjani CO2 sebenze njenge-solvent?
I-CO2 ukufuthelwa ngaphezulu kwama-90 degrees Fahrenheit kanye namaphawundi ayi-1000 nge-intshi ngayinye kucindezelwa kubhekwa njengento ephezulu kakhulu. I-Supercritical CO2 izosebenza njenge-solvent ehlakaza uwoyela.
Kuyini ubusika be-cannabis Extracts?
Ukuze ubusika bukhishwe isikhumba esingahlanzekile, okukhishwa i-cannabis eklanyelwe kuxutshaniswe ne-ethanol. Ngemuva kwalokho, isixazululo bese sifakwa kufriji ebandayo. Amakhaza avumela ukuhlukaniswa kwamakhompiyutha ngokuhlukahluka kumaphoyinti abo ancibilikayo nawokunisela. Ehlelweni lokupholisa, amafutha nezinsimbi ezinamaphoyinti aphezulu wokuncibilika kuzokhipha ukuphuma bese kungasuswa ngokuhlunga, i-centrifugation, decantation, noma ezinye izinqubo zokuhlukanisa. Ekugcineni, i-ethanol kumele isuswe kwikhambi. Lokhu kutholakala ngokubilisa. U-Ethanol uyasha ngo-78,5 ° C umfutho womoya. Ekugcineni, kutholakala i-oyili emsulwa ye-cannabis yamafutha.
Izinzuzo Zokudla Kwama-antioxidants
Ama-antioxidants asebenza njengendlela enamandla yokuvikela evikela amaseli womzimba emonakalisweni ukusuka ekuguguleni, ekuxinekeni, ekuvuvukeni nasekuguleni. Ucwaningo luphinde lukhombise ukuthi ama-antioxidants anganikela njengokwengeza isistimu ye-immun futhi akhombise izakhiwo ezilwa nomdlavuza.
Ama-antioxidants angama-molecule abamba ama-free radicals. Ama-radicals wamahhala nezinye izinhlobo ze-oksijini ezisebenzayo (ROS) zitholakala ezinqubweni ezijwayelekile, ezibalulekile zomzimba emzimbeni womuntu noma emithonjeni engaphandle njengokuchayeka kuma-X-ray, i-ozone, ukubhema ugwayi, ukungcola komoya, namakhemikhali anobuthi. Ama-radicals wamahhala akhiqizwa ekuphenduleni okuningi kwamakhemikhali emzimbeni ngenxa yesifo se-aerobic metabolism. Ukwakheka kanye nokuchayeka kuma-radicals mahhala kuyingxenye yezinqubo eziningi ze-metabolic futhi akunakugwenywa. Umzimba ophilile ungabhekana nokwakheka okujwayelekile kwama-radicals wamahhala, uwagwaze bese uwaguqula abe amangqamuzana angenangozi. Kodwa-ke, emicimbini ecindezelayo noma ngaphansi kwezimo zemvelo ezilimazayo, umthwalo wama-radicals wamahhala uyakhuphuka futhi unikela ukuvuvukala nokuguga. Ukudla okuhle nokunempilo okunempilo kunikela ngama-antioxidants, akhipha i-oxidative free radicals.
Kunemikhakha emibili yama-antioxidants angahlukaniswa, ama-antioxidant enzymes (isib. Superoxide dismutases, catalase, glutathione peroxidase), kanye nezakhi zomzimba ze-antioxidant, ezibandakanya amavithamini, amaminerali nama-phytochemicals ahlukahlukene. Amakilasi ambalwa wezakhi zokulwa ne-oxidative abhalwe ngezansi:
uvithamini E (α-tocopherol), uvithamini C (ascorbic acid), i-beta-carotene
glutathione, ubiquinol, ne-uric acid
ama-flavonoids (imibala ye-polyphenolic)
IVithamini C, i-uric acid, i-bilirubin, i-albhamuin, kanye nama-thiols angama-hydrophilic, ama-antioxidants angama-radical-scavewering, kuyilapho uvithamini E no-ubiquinol angama-lipophilic radical-scavewering antioxidants.
I-potency ye-antioxidants ekudleni ilinganiswa njengenani le-ORAC (i-O oxygen Radical Absobance Capacity). Ngokusho kwe-USDA, lokhu kudla okulandelayo kunamanani aphezulu we-ORAC futhi ngaleyo ndlela i-antioxidative potency enhle kakhulu:
AmaBrussels amahlumela: 980
I-Alfalfa ihluma: 930
Izimbali zeBroccoli: 890
Amagilebhisi abomvu: 739
I-pepper yensimbi ebomvu: 710
Izithelo zeKiwi: 602